"Saka kana munhu ava muna Muponesi. Yava imwevo mhuka. Itsva. Zvaakanga ari kare hazvichisipo. Tarisa uvone. Zvavapo zvose zvava zvitsva" (2 Vakorinde 5 ndima 17).
Mundima iyi mune mashoko anoti, "imwevo mhuka. Itsva". Mamwe maBhaibheri anoti, "chisikwa chitsva". Bhaibheri ratashandisa iri ndiro rinonatsa kubudisa ndima iyi zvakanaka. Nokuti Mukristu haasi munhu mutsva chete. Akatosiyana nevanhu venyika ino. Anotova chimwevo chipuka. Inotova imwevo mhuka. Haana nhoroondo yehupenyu hwekare.
Izvi zvakafanana nokunge wavona mhuka. Mhuka iyi inenge iri yausati wakambovona. Wobva wataura uchiti, "Iyi imhuka rudziiko iyi?" Unenge usiri kunatsa kuvona rudzi rwayo. Uye inenge yakasiyana nedzimwe mhuka dzawakambovona. Izvi ndizvo zvakaita munhu akazvarwa patsva. Rangarira mashoko akambotaurwa naJesu. Tinoaverenga muna Johane 3 ndima 8. Vakanga vari kutaura nezvekuzvarwa patsva. Vakati, "Mhepo inovhuvhuta. Inofamba nepainoda. Unongonzwa kutinhira kwayo. Asi hauzivi kwainobva. Hauzivi kwainenge ichienda. Izvi ndizvo zvakaita vanhu vaya. Vakazvarwa naMweya". Izvi ndizvo zvawavavo iwe. Wava imwevo mhuka.
Ungava wakazvarwa patsva. Pane chakatoitika pawakazvarwa patsva kudai. Chinhu ichi chakaitika mumweya. Wakashandurwa rudzi. Wakashandurwa ropa. Ropa ramai vako nababa vako rakabviswa mauri. Ukapiwa ropa reVamwari. Izvi ndizvo zvatinovona muna 1 Johane 5 ndima 13. Inoti, "Ndakakunyorerai zvinhu izvi. Iyemi vakagamuchira zita reMwanakomana waMwari. Kuti muzive kuti mava nehupenyu husingaperi. Mava veropa raMuponesi". Ichi chinotova chokwadi. Iwe wakazvarwa patsva. Uku kwakanga kuchitova kuzvarwa kwechipiri. Saka mweya wako wakasikwa patsva.
Bhaibheri rinotaura muna Jemusi 1 ndima 18 richiti, "Ndivo vakasarudza voga kutizvara. Vachishandisa Shoko ravo rechokwadi. Vachitsvaka kuti tive zvibereko zvavo. Zvekutanga. Zvavanokoshesa kudarika zvimwe zvisikwa zvavo zvose". Taitasi 3 ndima 5 inotivo, "Kwete nekuti mabasa edu akanga akarurama. Asi dzaingova tsitsi dzavo chete. Ndidzo dzakavatuma kutizvara kechipiri. Tikabuda tasukwa. Tagadzirwa patsva naMweya Mutsvene. Inova ndiyo nzira yavakatiponesa nayo". Vakorose 3 ndima 10 kusvika 11 inotsananguravo chipuka chitsva ichi. Inoti chakavandudzwa mafungiro. Chafanana naMwari. Vanova ndivo vakachisika.
Ndiwo mavonerwe aunoitwa naMwari. Ndiwo mavonero aunofaniravo kuzviita iwe. Wasiyana nevanhu venyika ino. Wava weimba yaMambo. Wafanana naMwari. Mwari havana mumwe akaita sewe. Havana kumbova nemumwe akaita sewe. Havasi kuzombova nemumwe akaita sewe. Saka itira Mwari madanha. Rarama hupenyu hwavakakurongera chaihwo.
Baba vandinoda. Ndinokutendai. Makandiita fuma yenyu. Ndiri fuma yenyu yakasiyana nedzimwe fuma dzose. Makaronga kuti ndive werudzi rwenyu. Ndinoshandisa Shoko renyu pakurarama kwangu nhasi. Ndichararama hupenyu hwamakandirongera. Saka muchakudzwa saMwari. Uye zita renyu richarumbidzwa. Ameni.